विदेश जान किन हुन्छ मरिहत्ते ? – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं, असार २६ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू भेटिन छाडेका छन् ।
एक महिनादेखि २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सिंहदरबार परिसर सुनसानजस्तै देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू पनि विदेश भ्रमणमा जाने क्रम बढेको छ ।
अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– असार मसान्तमा मन्त्रालयमा विभिन्न शीर्षकमा बाँकी रहेको बजेट सक्न उच्चपदस्थ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका हुन् ।
विकृति बढेको महसुस गरेका छौँ : मोहनकृष्ण सापकोटा, सामान्यसचिव
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसी, सिँचाइसचिव रामानन्दप्रसाद यादव, वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय विदेश भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । कृषिसचिव डा. सुरज पोखरेल भने स्विट्जरल्यान्ड उडिसकेका छन् । उनीसँग मन्त्रालयका १० कर्मचारीको समूह छ । उद्योगसचिव शंकरप्रसाद कोइराला भर्खरै विदेशबाट फर्किएका छन् । उनीसँगै मन्त्रालयका केही सहसचिवसमेत विदेश गएका थिए । उद्योग मन्त्रालयका केही सहसचिवलगायतका कर्मचारी हाल विदेशमै छन् ।